MOFONAINA NY ALAROBIA 19 OKTOBRA 2017. SALAMO 39:6-13 | Ma vie en abondance
Salamo nataon’i Davida, nanehoany fa mandalo izao fiainana izao. Manoloana izany dia hafa kely ny fomba fijerin’i Davida. Toa vao maika nahatonga azy hivavaka mafy tamin’Andriamanitra izany. Ary izany no hahatsapana fa mahery vavaka tokoa ny vaolombelona marina.
1) MANGATAKA NY FITARIHAN’ANDRIAMANITRA (6)
Mangataka amin’Andriamanitra i Davida mba hampianatra azy momba ny fihelin’ny fiainana. Mahatsikaritra matsy i Davida fa toa tsy mahalala ny tokony hataony akory ny olona manoloana izao fiainana mandalo izao. Vatiana manangon-karena izy nefa tsy hainy hoe hatao inona ny harena azony. Ho zava-poana tokoa mantsy ny fanagonana harena raha tsy ampiasaina amin’ny tokony ho izy izany. Efa nofakafakain’i Jesoa io hevitra io tao amin’ny ohatra mikasika ilay lehilahy mpanan-karena nanangom-bokatra be nefa tsy nahalala hihevitra izay sitrapon’Andriamanitra ampasana izany harena izany (Lioka 12:16-21). Ny tena vaolombelona marina kosa mangataka ny fitarihan’Andriamanitra amin’izany fiainana mandalo izany.
Ry havana, amin’izao androntsika izao dia ilaina ny mangataka ny fitariha’Andriamanitra. Satria tsy mahalala ny tokony hataontsika isika. Ohatra: manao tsinontsinona ny fahasalamana ny olona iray mba hahazoana harena, nefa mandany ny vola rehatra azony mba hahazoana fahasalamana. Mahafoy ny torimasony mba hitadiavana vola fa mandany ny volany indray avy eo mba hitsaboana ny aretina vokatr’iny tsy fahampian-torimaso iny. Mbola tsy fahaiza-mandrindra fiainana daholo izany. Fa raha tarihin’Andriamanitra kosa dia mahalala onony amin’ny fitadiavan-karena, ary mahalala ny tena tokony ampiasàna izany harena izany dia ny hanomezam-boninahitra an&Andriamanitra sy enti-manao ny asan’Andriamanitra (I Timoty 6 : 17. « Anaro ny mpanankarena amin’izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona, na hatoky ny harena miovaova*, fa Andriamanitra, Izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, [* Grika: fiovavovan'ny harena] 18. mba hanao soa, mba hanan-karena amin’ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, 19. ka dia hihary fanorenana tsara ho an’ny tenany ho amin’ny andro ho avy, mba hihazonanasan’Andriamanitra ». Araka izany dia tsy ny harena akory no ratsy fa ny fampiasan’ny olona azy tsy araka ny ditarihan’Andriamanitra no maharatsy azy. Koa mangataha ny fitarihan’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra.
2) MAMETRAKA NY FANANTENANY AMIN’ANDRIAMNITRA (7-11)
Rehefa resy lahatra i Davida fa mandali ny fiainana eto an-tany dia nitady ny anton’ny fanantenany izy sy izay tokony hametrahany ny fanantenay izy. Asongadiny fa ao amin’i Jehovah no misy fanntenana (and7). Koa mangataka amin’Andriamanitra izyba homonjy azy sy mba hanasitrana azy. Tsy misy azony antenaina tokoa mantsy satria mihasimba ny hatsarantarehiny , mety ho potika ny harenany ka mety handiso fanantenana avokoa. Fa tokana ihany no tsy mandiso fanantenana sy maharitra mandrakizay dia Jesoa irery ihany. Hoy i Jaona hoe: I Jaona 2 : 17. « Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay ».
Ry havana, mandalo izao fiainana izao. Tsy milaza akory izany hoe tokony hipetra-potsiny hiandry ny farany eto isika. Fa matoa isika napetraka eto misy antony, misy « mission » ampanaovin’ny Tompo antsika. Koa araraoty ny fotoana fohy hipetrahantsika eto mba hifaliana sy hanaovana ny tsara (Mpitoriteny 3 : 12. « Fantatro fa tsy misy tsara amin’ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara*, raha mbola velona koa izy.[Na: mahazo soa]) » ary ny mikatsaka izay hahasoa ny hafa sy ny mpiara-monina (Efesiana 5 : 16. « ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.Ka mangataka ny fitarihan’Andriananitra sy mametraka ny fanantenany amin’AndriamanitraHo an’Andriamanitra irery ny voninahitra.